गण्डकी सरकारले तोक्यो घरजग्गा, गाडी र मनोरञ्जन करका दर
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै लागू हुने गरी करको दर तोकेको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले उठाउनेबाहेकको कर निर्धारण गरेको हो । सरकारले बजेटमार्फत १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य लिएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, प्राकृतिक स्रोत शुल्क, सवारी साधन, विज्ञापन, मनोरञ्जन, प्राकृतिक स्रोत शुल्क, पर्यटन, र मनोरञ्जन कर उठाउन उठाउने गरी शुल्क निर्धारण गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक विधेयकअनुसार साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए । जग्गाको राजीनामा, सट्टापट्टा र सँगोलनामाको लिखत थैली अंकमा महानगरपालिकालाई ५ प्रतिशत, नगरपालिकालाई ४ प्रतिशत र गाउँपालिकालाई २ प्रतिशत कर जानेछ । अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइ गर्दा ३० लाखसम्मको थैली अंकमा महानरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई समान ०.२ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्नेछ । ३० लाखदेखि २ करोडसम्म ०.५ प्रतिशत र सोभन्दा माथि १ प्रतिशत कर स्थानीय तहलाई बुझाउने गरी शुल्क निर्धारण भएको छ । यस्तै चलचित्र घरहरुले पनि तहअनुसारको शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । चत्रचित्र हलको प्रवेश शुल्कबाट १५ प्रतिशत महानगरपालिका, १० प्रतिशत नगरपालिका... View All ...."गण्डकी सरकारले तोक्यो घरजग्गा, गाडी र मनोरञ्जन करका दर"
काठमाडौं – नेपाल गणित समाजले नेपाली विश्वविद्यालयहरुमा गणित विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका विभिन्न १६ विद्यार्थीलाई चार लाख रुपैंयाको छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. सुधा त्रिपाठीले उक्त एनएमएस फेलोशिप अवार्ड प्रदान गरेकी हुन् । समाजले यसै बर्षबाट प्रदान गर्न शुरु गरेको उक्त छात्रवृत्तिको राशी जनही रु. २५ हजार नगद र प्रमाण पत्र रहेको छ । उक्त पुरस्कार नेपालमा गणितको अनुसन्धानको लागि कोसे ढुङ्गा भएको भन्दै त्रिपाठीले नेपाल गणित समाजले नेपालमा गणितको अध्ययन, अनुसन्धान तथा यसको विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनिय योगदान पुर्र्याइरहेको भन्दै समाजका कार्यहरुको प्रशंसा समेत गरिन् । अनुसन्धानकर्ताहरुलाई यो पुरस्कारले अध्ययन अनुसन्धानमा थप उर्जा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले उत्कृष्ट अनुसन्धानको लागि शुभकामना व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा समाजका सभापति प्रा. डा. टंकनाथ धमलाले नेपालमा गणित विषयमा अनुसन्धान गरि विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको भन्दै उनीहरुलाई हौसला प्रदान गर्न र थप विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा आकर्षित गर्न पुरस्कार सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । पुरस्कारको रकम उपलव्ध गराएकोमा निक सिमोन फाउण्डेशनलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै डा. धमलाले यसले नेपालमा गणित र यसको प्रयोग सम्बन्धि स्तरीय अनुसन्धानमा ठुलो योगदान पुर्याउने विश्वास ब्यक्त गरे... View All ...."विद्यार्थीलाई चार लाखको छात्रवृत्ति"
विवाहित महिलामाथि आफ्नै लोग्नेले गर्ने यौन हिंसाका सम्बन्धमा भारतको दिल्ली हाइकोर्टले मंगलबार एउटा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । अदालतले एक मुद्धाको फैसलामा भनेको छ- बिहेको अर्थ यो होइन कि कुनै पनि महिला आफ्नो लोग्नेसँग हरक्षण यौन सम्पर्कका लागि राजी होउन् । साथै अदालतले बलात्कार हुनका लागि शारीरिक बलको अनिवार्यता नहुने पनि ठहर गरेको छ । अदालतका अनुसार दाम्पत्य जिवनमा लोग्ने र स्वास्नी दुवैलाई यौन सम्पर्क का लागि नाइँ भन्ने अधिकार हुन्छ । वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध किटान गर्न माग गर्दै दायर गरिएको निवेदनमा फैसला गर्दै अदालतले भनेको छ कि बलात्कार नहुनका लागि पुरुषले यौन सम्पर्कका लागि महिलाले सहमति दिएको सावित गर्नुपर्दछ । पुरुष अधिकारवादी संस्था मेन वेलफेयर ट्रस्टको दाबी खारेज गर्दै अदालतले वैवाहिक बलात्कारमा बल प्रयोग अनिवार्य नहुने पनि बताएको छ । संस्थाले पति पत्नीबीचको यौन सम्पर्क बलात्कार हुनका लागि लोग्नेद्वारा बलजफ्ती गरेको वा धम्की दिएको अवस्था हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । तर अदालतले वर्तमानमा बलात्कारको परिभाषा नै बदलिएको भन्दै बलात्कृत महिलामा घाउचोट हुनैपर्छ भन्ने नरहेको ठहर गरेको छ । साभारः अनलाइन खबर
प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र रद्दीको टोकरीमा फाल्दै भारत उड्यो कृषिको जम्बो टोली
बजेट सक्ने प्रयोजनका लागि अवलोकन भ्रमणका नाममा कर्मचारीहरु लगातार भारत भ्रमणमा निस्किँदैछ छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कर्मचारी अनावश्यक काममा विदेश भ्रमण नगर्ने सरकारको नियमलाई लत्याउँदै विदेश उडेका छन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय कर्मचारीको टोली पनि भारत उड्न तयारी गर्दैछ ।२ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मंगलबारबाट विदा भइसक्यो । तर, बजेट सक्न राज्य कोषको दोहन भने जारी नै छ । गतवर्षको स्वीकृत कार्यक्रमको नाममा भ्रमणमा बजेट दुरुपयोग गर्न आर्थिक वर्ष सकिएपछि कृषि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र त्यस अन्तरगतका परियोजना अझै पनि सक्रिय छन् । सरकारले जारी गरेको निर्देशिका विपरीत भ्रमणमा जान लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मंगलबार लेखेको पत्रलाई पनि रद्दीको टोकरीमा फालेर कर्मचारीको जम्बो टोली विदेश उडेको हो । मंगलबार र बुधबार मात्रै ३ पटक गरेर ६० जना कर्मचारी भारत भ्रमणमा निस्किएका छन् । कृषि विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन मान्नु नपर्ने भनेपछि कर्मचारीको भ्रमण नरोकिएको हो । बुधबार मात्रै २३ जना कर्मचारीको टोली भारत भ्रमणमा गएको छ । हालसम्म ६० जना कर्मचारी ७ दिनका लागि भारत भ्रमण… View All ….“प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र रद्दीको टोकरीमा फाल्दै भारत उड्यो कृषिको जम्बो टोली”
Write an Algorithm and program to enter the length & breadth ofaroom and calculate and print its area and perimeter.
July 18, 2018 July 18, 2018 Everything Online
Solution: Aim of Experiment: To calculate the and print the area and perimeter ofaroom. system Requirement: Software: O/S: Win 98 or Above Application: Qbasic software Hardware: Processor: PIV or Above RAM: 64 MB or Above Algorithm: Step 1: Start Step 2: Assign the value of length and breath Step 3: Calculate the area and perimeter using formula area=lxb and perimeter=4πr2 Step 4: Print area and perimeter Step 5: Stop Flowchart: Draw the flowchart… Source Code: CLS PRINT “****Calculate the Area and perimeter of room****” PRINT “######################################” LET pi=3.14 INPUT “Enter the length :”, l INPUT “Enter the Breath :”,barea = l *bPRINT “Area=”, area INPUT “Enter the Radius”, r perimeter =4* pi * (r * r) PRINT “Perimeter=”, perimeter END 6. Output: Enter the Length:5Enter the Breath:6Area=30 Enter the Radius:3Perimeter = 113.04 7. Conclusion: Likewise using above source code and formula we can find out the Area and or perimeter ofaroom in… View All ….“Write an Algorithm and program to enter the length & breadth ofaroom and calculate and print its area and perimeter.”
Computer कम्प्यूटर, Qbasic
पञ्चकन्या माई हाइड्रोको आईपिओ पहिलो दिनमै बिक्यो,१८ हजार बढीको आवेदन
July 17, 2018 Everything Online
पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर कम्पनीले मंगलबारदेखि सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको साधारण सेयर पहिलो दिनमा नै विक्री भएको छ । कम्पनीले कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्टाएर सर्वसाधारणका लागि १० लाख एक हजार कित्ता सेयर खुला गरेकोमा १३ लाख बढी कित्ता माग भएको हो । हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा विक्ती प्रबन्धक सनराइज क्यापिटलले सेयर खुलेकाे पहिलाे दिन मंगलबारमा मात्र १८ हजार आवेदनबाट १३ लाख कित्ता बढी सेयर माग भएको जनाएको छ । अार्इपिअाेमा साउन ४ गतेसम्म अावेदन गर्न पाइने छ । एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ जारी पूँजी रहेको पञ्चकन्याले जारी पूँजीको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्रीमा ल्याएको हो । कम्पनीले कूल ११ करोड रुपैयाँको ११ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गरेको हो । निष्काशित आईपिओमध्ये ४४ हजार कित्ता कम्पनीको कर्मचारीहरू र ५५ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्टाइएको छ । १० लाख एक हजार कित्ता सेयरका लागि भने सर्वसाधारणले आवेदन गर्न पाउनेछन् । आईपिओमा न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम पाँच हजार ५०० कित्तासम्म आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । आईपिओमा पहिलो दिनमा नै निष्काशित सबै सेयरको माग भैसकेको हुँदा गोलाप्रथाबाट सेयर… View All ….“पञ्चकन्या माई हाइड्रोको आईपिओ पहिलो दिनमै बिक्यो,१८ हजार बढीको आवेदन”
चुनावअघि फ्री वाइफाइ, बजेटपछि इन्टरनेट महंगो ! काठमाडौं । मंगलबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । यो सँगै विभिन्न वस्तु तथा सेवामा करको दरमा वृद्धि भएको छ । यो वर्षको बजेटले गरेको वृद्धिका आधारमा कतिपय वस्तुमा भन्सार लगायतका शुल्क बढिसकेका छन् । तर, केही सेवा शुल्क तथा कर भने आजैबाट लागू भएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा गएसँगै विभिन्न करका दरहरुमा वृद्धि भएको हो । विशेष गरी संघको बजेटले बढाएको करको दरले सर्वसाधारण बढी प्रभावित हुने अवस्था छ । साउन १ गते अघि नै संघको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका भन्सार लगायतका राजस्वको दर बढिसकेको छ । तर, प्रदेशर स्थानीय तहको बजेटले ल्याएको नयाँ करको दर भने मंगलबारबाट लागू भएको छ । अब तीनै तहका सरकारले नयाँ बजेटमार्फत घोषणा भएको दरअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६का लागि कर संकलन थाल्नेछन् । इन्टरनेट र फोन सेवा महंगियो सरकारले दूरसञ्चार शुल्कमा वृद्धि गर्दै इन्टरनेट सेवामा पनि शुल्क लगाएपछि फोन तथा इन्टरनेट सेवा महंगिएको छ । चुनावअघि वाम नेताहरूले फ्री वाइफाइको को नारा दिएका थिए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उक्त… View All ….“साउनबाट कुन-कुन वस्तु तथा सेवामा कति कर बढ्यो ?”
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै लागू हुने गरी करको दर तोकेको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले उठाउनेबाहेकको कर निर्धारण गरेको हो । सरकारले बजेटमार्फत १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य लिएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, प्राकृतिक स्रोत शुल्क, सवारी साधन, विज्ञापन, मनोरञ्जन, प्राकृतिक स्रोत शुल्क, पर्यटन, र मनोरञ्जन कर उठाउन उठाउने गरी शुल्क निर्धारण गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक विधेयकअनुसार साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए । जग्गाको राजीनामा, सट्टापट्टा र सँगोलनामाको लिखत थैली अंकमा महानगरपालिकालाई ५ प्रतिशत, नगरपालिकालाई ४ प्रतिशत र गाउँपालिकालाई २ प्रतिशत कर जानेछ । अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइ गर्दा ३० लाखसम्मको थैली अंकमा महानरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई समान ०.२ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्नेछ । ३० लाखदेखि २ करोडसम्म ०.५ प्रतिशत र सोभन्दा माथि १ प्रतिशत कर स्थानीय तहलाई बुझाउने गरी शुल्क निर्धारण भएको छ । यस्तै चलचित्र घरहरुले पनि तहअनुसारको शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । चत्रचित्र हलको प्रवेश शुल्कबाट १५ प्रतिशत महानगरपालिका, १० प्रतिशत नगरपालिका… View All ….“गण्डकी सरकारले तोक्यो घरजग्गा, गाडी र मनोरञ्जन करका दर”
भुटानमा सिकेको प्रविधि पोखरामा प्रयोग ! प्लास्टिक पेलेर सडक पिच
पोखरा । पोखरालाई प्लास्टिकका झोला र गिलास निषेधित नगर बनाउने घोषणा घोषणामै सीमित रहृयो । प्रयोग भएका प्याटिकका झोला र गिलासहरुको व्यवस्थापन अहिले ठूलो समस्या बनेको छ । तर, पोखराका युवाले प्लास्टिक प्रयोग गरेर सडक पिच गर्न सकिने बताएका छन् । गि्रन रोड वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका युवाले प्लास्टिक पेलेर बाटो पिच गर्ने प्रविधि विदेशमा सिकेर पोखरामा प्रयोग गरेका हुन् । प्लास्टिकले वातावरणमा पार्ने प्रभावलाई कम गर्न र यसको वैकल्पिक बाटो पहिल्याउँदै युवाहरुले प्लास्टिक पेलेर १ सय मिटर बाटो पिच गरेरै देखाएका छन् । पोखरा-१४ अनुपम टोलमा प्लास्टिक पेलेर गरिएको सडक पिच मंगलबार पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले अवलोकन तथा उद्घाटन गरेका छन् । कम्पनीले मेकानिकल इन्जिनियर विमल बास्तोला र सिभिल इन्जिनियर राजीव सुवेदीलाई प्लास्टिकको प्रयोगबाट सडक पिच गर्ने प्रविधिको एक हप्ते तालिम लिन भुटान पटाएको थियो । भुटानबाट फर्केपछि उनीहरुले पोखरा-१४ मा एक सय मिटर परीक्षणका लागि सडक पिच गरेका हुन् । प्लास्टिकको प्रयोग गरेर बनाइने यस किसिमको सडकको सुरुवात सन् २००१ मा भारतबाट भएको कम्पनीका संस्थापक विमल बसेलले जानकारी दिए । ‘प्लास्टिकले वातावरण र मानवीय स्वास्थ्यमासमेत असर पार्छ ।… View All ….“भुटानमा सिकेको प्रविधि पोखरामा प्रयोग ! प्लास्टिक पेलेर सडक पिच”